Xaflad Qalin-Jabin Ah Oo Loo Qabtay Arday Lagu Tababaray Cilmiga Barashadda Daawooyinka Ayaa Lagu Qabtay Xarunta Jaamacadda Dr.Adna Aadan + SAWIRO |
Xaflad Qalin-Jabin Ah Oo Loo Qabtay Arday Lagu Tababaray Cilmiga Barashadda Daawooyinka Ayaa Lagu Qabtay Xarunta Jaamacadda Dr.Adna Aadan + SAWIRO
Xaflad qalin jabin ah ayaa loo qabtay 18 arday oo lagu tababaray barashadda daawooyinka (pharmacology) kuwaasi oo mudo sanad ah lagu tababaray nidaamka daawooyinka loo iibiyo, xirfadaasi oo baahi weyn loo qabo ayey jaamacadda Adna Aadan siisay ardaydan iyadda oo kaashanaysa hay’adda SCF oo deeq ka helaysa midawga yurub, Ardaydan ayaa mudadii ay waxbaranayeen waxa kafaala qaaday kharashka ku baxayey hay’ada SCF oo wada shaqayn kala leh dhanka waxbarashadda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. Munaasibadan waxa ka soo qayb-galay madax kala duwan oo uu ugu horeeyo Gudoomiyaha Jaamacadda Adna Mudane Maxamed Xuseen Cismaan (Mu’adinka), Yaxye Maxamuud Ubaxle oo ka mid ah maamulka jaamacadda Adna, madaxa tababaradda iyo shaqo-abuurka ee hay’adda SCF Mudane Jimcaal Yuusuf Magan, ardayda qalin-jabinaysey, waalidiin iyo dad-weyne kale oo aad u tiro badan.
Ugu horeyn waxa munaasibadaasi hadalo kooban ka soo jeediyey mudane Yaxye Maxamuud Ubaxle oo ka mid ah madaxdda jaamacadda Adna Aadan waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; waxan aad ugu faraxsanahay in aad nagala soo qayb-gashaan xafladda qalin-jabinta ardaydan oo mudo sanad ah aanu ku tababaraynay cilmiga barashadda daawooyinka ama farmasiyadda. Tababarkan waxan ku bilawnay 23 arday kuwaasi oo soo dhammaystay waxbarashadda dugsiyadda sare ee dalka, tiradaa aan soo sheegnay waxa waxbarashaddii dhammaystay 18 arday halka ay shan arday ka baaqsadeen in ay buuxiyaan ama dhammaystaan waxbarashaddii loo qorsheeyey sidaa darteed waxan maanta halkan ugu qabanaynaa xaflad lagu gudoonsiinayo shahaadooyin 18-kaa arday ee dhammaystay waxbarashadoodii. ardaydan maanta waxbarashadoodii dhammaysatay waxan kula dardaarmayaa in ay masuuliyad muujiyaan marka ay shaqadda bilaabaan, yaan la odhan kuwan yaa wax soo baraye ha idinka muuqato aqoontii la idin soo baray.
Waxa sidoo kale isaguna munaasibadaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Aadna Aadan Mudane Maxamed Xuseen Cismaan (mu’adinka) waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; ugu horeyn waxan hambalyo kal iyo laab ah u dirayaa ardaydan maanta qalin-jabinaysa iyo waalidiintood iyo macalimiintii wax soo baray kuwaasi oo mudadii ay wax barayeen muujiyey dhabar-adayg iyo dedaal dheeraad ah, sidoo kale waxan mahadnaq balaadhan u soo jeedinayaa hay’adda SCF oo mashruucan maalgalisay taasi oo ugu deeqday ardaydan si ay cilmigan qaaliga ah bartaan. Dhanka kale waxan dardaaran u dirayaa si ay waxbarashadooda halkaa uga sii wadi lahaayeen ee aanay halkaa kaga hadhin. Markii aanu barnaamijkan bilaabaynay waxaanu kullamo joogto ah yeelanay madaxda hay’adda SCF, waxaanan isla lafa-gurnay sidii aanu u bilaabi lahayn barnaamij anfaca dalka iyo dadkaba kaasi oo abuuri kara shaqooyin si aanay ardaydu u tahriibin, illaahay mahadii kulamadaasi kumaanu guul-daraysan oo waynagaa maanta midhihii hayna.nidaamka ardaydan lagu soo xulay waxay ahayd in ay soo codsadaan ardayda dugsiyadda sare ka baxday kuwaasi oo aan awoodi karayn in ay iska bixiyaan waxbarashadda jaamacadaha dalka. Waxa soo codsaday arday aad u tiro badan waxanan ka xulanay kuwoodii ugu liitay dhaqaale ahaan.
Ugu danbayntii waxa munaasibaasi ka hadlay Madaxa Tababaradda iyo shaqo-abuurka dhalinyaradda ee hay’adda SCF waxaanu ka xog waramay ujeedooyinka mashruucan ka danbeeyey, dhanka kalena waxa uu dardaaran u soo jeediyey ardayda qalin jabinaysey waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; mashruucan waxa maalgalisey midawga yurub waxaanay soo marisey hay’adda SCF si ay u fuliso, waxaanu mashruucani ka mid yahay mashruuca horumarinta cilmiga II kaasi oo ay ka wada shaqeeyaan seddexda hay’adood ee kala ah SCF, NRC iyo Care. Waxaanay mashruucan kala shaqeeyaan hay’adahani wasaaradda waxbarashadda iyo sayniska, waxana sida aan soo sheegnay mashruucan Somaliland ugu deeqay midawga yurub. Dhanka kale waxan ardayda kula dardaarmayaa in ay waxbarashadooda halkaa ka sii wadaan isla markaana ay ku dedaalaan sidii ay shaqooyinka markay galaana ilaaliyaan wakhtiga si ay u gutaan waajibaadka shaqo ee loo igmado.
Dhanka kale waxa iyaguna munaasibadaasi ka hadlay qaar ka mid ah shirkaddaha ka ganacsadda daawooyinka, xubno ku hadlayey ururka xirfadlayaasha daawooyinka, waalidiinta iyo qaar ka mid ah ardayda qalin-jabinaysay.